Dubai "The Changer Life" | Sheeko wanaagsan oo ka socota mid ka mid ah kuwa raacaya
Dunidan waxaa ku yaal meel la yiraahdo "Dubai"
Pearls ee Switzerland
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 13, 2019
Dubai "The Changer Life" - Shirkadda Dubai City
Dubai “Isbedelka nolosha” - Waxaan maqlay sheekooyin ku saabsan Dubai “Isbadalka nolosha” sanadihii laakiin waxaan u duulay meelo kale oo adduunka ah waxaana ka muuqatay calaamadaha xun. Farsamooyinkayga si daacadnimo ah ayaan u sii daayay oo leh meherado ganacsi oo fara badan, laakiin taasi waxay keentay oo kaliya faa iidadoodii waxayna talaabsadeen mustaqbalkeyga.
Ururka & Ganacsatada siyaasadda Waxay ku haftay riyadaydii xariiqda halkaasoo aan ku waayey ehelladii & kuwii jeclaa. Waxaan ku jirnaa ERA halka jacaylka iyo xiriirku ay noqdeen wax jaceyl in yar oo ka mid ahna way jiraan oo isku hallayn kara kartidaada iyo ujeedooyinka noloshaada.
Imaaraadka Carabta, Dubai
Walaal waayeel ah had iyo jeer wuxuu u egyahay aabe iyo Culayska waajibaadka ayaa ii rogaya sidii dhagax oo kale Waxaan sugayay wax igu dhaca si aan ula qabsado boos deggan.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la iiga qaaday mid ka mid ah shirkadaha dhismaha ee Dubai iyo Waxaan soo galay dhulka fursadaha. Maalintii ayaan baxay garoonka oo waxaan goob joog ka ahaa howlaha xarunta garoonka, teknolojiyada, nidaam isgaarsiin oo si habeysan loo soo abaabulay oo waxaan si sax ah u xaqiiqsaday isla daqiiqadahan in dhulkani yahay maxay Waxaan sugayay noloshayda oo dhan.
Dubai waa dawlad halkaa ka jirta Shaqaalaha buluuga ah waxaa loola dhaqmaa sida aadanaha oo ay bixiyeen xuquuqda buuxda ee caddaaladda waxaana loola dhaqmayaa si isku mid ah iyadoon loo eegaynin jinsiyadaha. Dowlada Dubai ayaa qoondeysay waraaqo rasmi ah si loo hubiyo baaritaan joogto ah oo ku saabsan hoygooda, cunnadooda, gaadiidkooda, daaweynta caafimaad iyo dhammaan tas-hiilaadka kale ee shaqaalaha buluugga aan xitaa ka fikiri karin. Waxaan aaminsanahay buluug-collar Shaqaalaha Dubai waa boqorka inta ka hadhsan shaqaalaha Aasiya.
Dubai waa goob riyood!
Dubai waa meesha dhulkan ilaahay ku mannaystay Halkaas oo aan ka dareemay in aan kuray ahay aamin xitaa haddii ay kaligeed ku socoto waddada 2 habeenkii.
Ka fikir wax kasta oo ka hel Dubai, Qiyaasta 1 Dhm ilaa malaayiin. Erayada ugu fudud ee si fudud loo heli karo ee aan waligey ku arkay noloshayda. Waan ku talin karaa Dubai waa sumadda dukaamaysiga.
Dubai waa gobolka kaliya halkaas oo nin caadi ah uu ku safri karo isagoo bixinaya 10 Dhms oo keliya booqashada Munaarad Muuqaal Dheer iyo Dunida ugu weyn Dunida (Mall of Dubai), taasoo si cad u muujineysa in dalkani uusan lahayn cunsuriyad. Gobolka kaliya ee adduunka ku nool halkaasoo dadka ka kala yimid dhaqammada iyo dhalashooyinka oo dhan ay noqon karaan deriskaaga kuugu dhow.
Waan arkay oo waan markhaati furay meheradahu waa kuwo aad u amaan badan waxayna leeyihiin mustaqbal ifaya, laakiin guusha waxaa lagu gaari karaa oo keliya marka la keeno fikradaha hal abuurka ah oo la raaco heerarka uu hoggaamiyo Govt-ka. ee Dubai.
Nin caqli leh oo ka socda waddammada fog ayaa heli kara boqolaal ganacsi fikradaha talaabo kasta, Dubai waa xarunta ugu wanaagsan ee wax lagu barto by dhinacyada oo dhan jiilalka.
Ilaa hadda safarka iyo dalxiiska waa arrin walaac, sidaas darteed fikradahayga laba bilood marnaba kuma filna si sahaminta quruxda dhabta ah ee Dubai.
Waxaan galay dunida ugu fiican & waxaan ku riyooday meeshii aan ugu safri lahaa Dubai oo aan riyadeyda ka rumoobo. Sidoo kale, Dubai waxay leedahay shirkado badan oo loo yaqaan 'Cryptocurrency'.
Shirkadeena HR hadda siinta hagyo fiican ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.